Fampidirana sy fampiharana ny milina fanapoahana baoritra mitifitra
Maninona no mifidy anay amin'ny mpamatsy tifitra mpamatsy tifitra anao?
Nisokatra indray ny Dubai ho an'ny mpizaha tany
Dubai Reopens ho an'ny mpizahatany dia nanambara tamin'ity herinandro ity fa nisokatra ho an'ny fizahan-tany izany. Saingy mbola tsy fantatra mazava hoe firy ireo mpitsidika vahiny no hiverina satria maro ny firenena mbola miady mafy hampiato ny fihanaky ny coronavirus. Ny fanjakana ao amin'ny United Arab Emirates dia miankina betsaka amin'ny mpizahatany handany ...
Androany dia manomboka i Wuhan
Androany dia navela hisokatra amin'ny fomba ofisialy i Wuhan, aorian'ny 76 andro mihidy. Ny daty fanakatonana ofisialy an'i Wuhan dia 10 am tamin'ny 23 Janoary 2020. Nisy fipoahana tampoka tampoka teo ilay bokotra fiatoana tao an-tanànan'i Wuhan. Saingy soa ihany fa tsy misy fetra maro tsy tambo isaina, miaraka amin'ny ezaka feno tahotra sy tsy mahavita tena ary ny ...
Vaovao tsara! Ry sakaiza malala, miomana hamaranana ny fanakatonana ireo firenena valo any Eoropa ity
Hatramin'ny nanombohan'ireo firenena eoropeana ny nanakatonana ny firenena, izay afaka tsy hihidy, nanomboka nanohy ny famokarana, rehefa mety hampandeha tsara ny tsena dia lasa zary manahirana ny olona. Indrindra ny firenentsika momba ny varotra vahiny manoloana ny olana. Tahaka ny farany ...
Inona avy ireo milina fipoahana mitifitra mety ho an'ny mpampiasa? Miankina amin'ny haben'ny fitaovana sy ny vokatra.
Betsaka ny fanamafisana ny milina fanapoahana mitifitra. Ny fanasokajiana ny firafitra dia mizara arakaraka ny fitaterana fandatsana ary ny firafitra tsirairay dia manana ny asany manokana. Ohatra: Ampidirina amin'ny lamba kely sy antonony lehibe mety amin'ny karazana amponga na rojo vy; Ny f ...
H miendrika basy mitifitra, Masinina fipoahana baomba, Kodiarana fanapoahana tifitra, Fanapoahana tsiro, nitifitra fatratra Spare Parts, tifitra Peening Machine, Ny vokatra rehetra